Myitkyia Kahtawlik Sasana Kaw Christmas Hte Shaning Nnan Hkap Tau Man Hkrum Lu Sha Poi Galaw | Radio Veritas Asia
Myitkyia Kahtawlik Sasana Kaw Christmas Hte Shaning Nnan Hkap Tau Man Hkrum Lu Sha Poi Galaw
Manhkrum Lu sha poi hta mu lu ai Dr.Hkyet Awng hte Wa Saradaw Francis Daw Tang
30 December 2018 ,Aung Na, Myitkyina
Myitkyina Kahtawlik SasanaaChristmas hte Shaning nnan hkaptau hkalum ai man hkrum shana shat sha poi lamang hpe dai ni 2018 December 30 ya shana, Aung Nan, San Columban Nawku Jawng Wang, Mungbawng Ginjaw Rung kaw galaw lu sai.
Man hkrum lu sha poi hta Jinghpaw Mung Hkringmang Daju Dr.Hkyet Awng hte Asuya Mung Up Hkang Salang ni, Myitkyina Sasana Ginwang Up Wa Saradaw Francis Daw Tang hte Jau Ma Ma ni,Nawku Hpung shagu na Kanu Kawa Sara ni hte laksan saw shaga da ai manam ni sa du lawm ma ai.
Poi Lamang hta Jinghpaw Mung hkringmang daju hku nna Mungga shaga ai hta, " ya na zawn christmas hte shaning nnan hkap tau ai lamang hta Kahtawlik Nawku hpung hku nna anhte hpe saw shaga ai majaw chye ju dum kabu ai lam, Shangai wa ai Madu Yesu gaw anhteamatu Simsa lam hpe gaw de ya lu ai shaman chye ju ndai hkritsmas shaning nnan ten hta anhte yawng hpe jaw ya u ga hte Mungdaw Simsa Lam , Nam hpam malu masha tsep kawp mat mat hkra pat jasan magam bungli hta makam masham amyu ru sai n-gin hka yawng myithkrum myit ra let shang lawm shakut na matu, bai nna Kahtawlik Nawku Hpung gaw lam shagu hta grai myit hkrum myitra re ai Nawku Hpung re ai lam,n dai hpe katsi la nna Nawku Hpung ni hte Wuhpung wuhpawng ni yawng shada myithkrum myit ra rai Mungdaw simsa lam hta shanglawm let Mung shawa ni ra lata da ai anhte Mungdan Asuya ni galaw shakut nga ai tengman rap ra ai Federal Democracy Mungdan gaw gap ai hta shanglawm shakut ga' nga nna tsun lai wa ai.
Wa Saradaw Francis Daw Tang kaw nna mung ' ya na zawn saw shaga da ai hte maren sa du shang lawm ai ni yawng hpe grai chye ju dum ai lam, Mungdan simsa lam hpe grai ra ahkyak nga ga ai hte maren makam masham hpung n-gin hka yawng myit hkrum myit ra let , Mungdaw Asuya hte ta hkindun nna shawng lam de shakut sa wa ga' nga nna hkaw tsun lai wa sai.
ကချင်ပြည်နယ်၊ကက်သလစ်သာသနာ၊ မြစ်ကြီးနားဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ကြီး ဖရန်စစ်ဒေါ့တန်အမှူးပြုသော ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်အကြိုဂုဏ်ပြိုမိတ်ဆုံစားပွဲကို ဒီနေ့ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆း၀၀ နာရီတွင် စိန်ကိုလန်ဘန်ကာဒီဒြယ် ဘုရားကျောင်းဝင်း၊သာသနာ့အကျိူးဆောင် ဓမ္မာရုံ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
မိတ်ဆုံစားပွဲသို့ ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ် ဒေါက်တာ ခက်အောင်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၊မြစ်ကြီးနားသာသနာ ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော် ဖရန်စစ်ဒေါ့တန်နှင့်ဘုန်းကြီး စစ္စတာများ၊ ဘာသာပေါင်းစုံမှ အသင်းတော်ဆရာ ဆရာမများ၊သာသနာ့အကျိူးဆောင်လူကြီးမိဘများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ လာရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချူပ် ဒေါက်တာခက်အောင်နှင့်ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဖရန်စစ်ဒေါ့တန်တို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ ကချင်ပြည်နယ် အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းရန်လူမျိူးဘာသာမခွဲခြားပဲ အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပြီး၊ ဒီခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးကာလမှစကာ စည်းလုံးညီညွတ်ရန် ကြိုးစားကြဖို့နှင့် မှူးရစ်ဆေးဝါးပြာသာနာ အမြန်ဆုံးပဖျောက်ရန် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့ နှစ်ဦးစလုံး တစ်ညီတညွတ်တည်း ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်အကြို မြစ်ကြီးနားဇုံနယ်မှ ဗုဒ္ဓရဟန်းသံဃာတော်များအား ခရစ်မတ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Thomas / MPH